Akhriso: Khasaaraha Ka Dhashay Weerakii Hotel Madiina, Ee Kismaayo – Goobjoog News
Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, oo Saxaafada la hadlay ayaa ka tacsiyeeyay dadkii ku waxyeeloobay Qaraxii iyo weerarkii lagu qaaday Hotelka Madiina isagoona ka warbixiyay sida ay wax u dheceen.
Madaxweynahu wuxuu sheegay in 26 qof ay ku dhinteen weerarka halka 56 kalana ay ku dhaawacmeen isagoo sheegay in dadka dhintay ay ku jiraan qaar haystay jinsiyadaha dalal kale
Soomaali Kenyan 3 qof.
Soomaali Canadian 1 qof.
Soomaali British 1 qof.
Soomaali American 2 qof.
Soomaali Tanzanian 3 qof.